विज्ञ भन्छन्- उपत्यकामा राति ८ बजेपछि सवारी चलाउन नपाइने सरकारको निर्णय अव्यवहारिक :: Setopati
विज्ञ भन्छन्- उपत्यकामा राति ८ बजेपछि सवारी चलाउन नपाइने सरकारको निर्णय अव्यवहारिक काठमाडौंका सिडिओ भन्छन्- समस्या परेकालाई रोक्दैनौं
विवेक राई काठमाडौं, साउन २६
सरकारले आगामी बिहीबारदेखि काठमाडौं उपत्यकामा राति ८ बजेपछि अत्यावश्यकबाहेक सबै सवारी साधन चलाउन नपाइने निर्णय गरेको छ।
मंगलबार उपत्यकाका तीनै जना प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूको बैठकले सो निर्णय गरेको हो।
तर विज्ञहरूले भने सरकारको उक्त निर्णय अव्यवहारिक भएको बताएका छन्।
संक्रमण रोग विशेषज्ञ डा. शेरबहादुर पुनले सरकारले संक्रमण के कारणले बढी फैलिन्छ भनेर आकलन नगरी सो निर्णय गरेको जनाए।
'संक्रमण बढी सर्ने भनेको मानिसहरूको धेरै भिडभाड हुँदा हो। राति त झन् तुलानात्मक रूपमा कम भिडभाड हुन्छ। त्यो चाहिँ अलिक व्यवहारिक भएन,' उनले भने।
सरकारले संक्रमणको 'चेन ब्रेक' गराउने उद्धेश्यले उक्त निर्णय गरिएको भए पनि यसले 'चेन ब्रेक' नगराउने डा. पुन बताउँछन्।
उनले राति यसै पनि कम मानिसहरू हिँडडुल गर्ने भन्दै दिउँसो हुने भिडभाडकै कारण अहिले संक्रमण बढिरहेको जनाए।
यो निर्णयले सर्वसाधारणलाई अनावश्यक दुःख दिने भन्दै उनले भने, 'एउटा मान्छे गाडी लिएर दिउँसो काममा जान पाउने अनि फर्किंदा चाहिँ समातिने भन्ने त भएन नि!'
डा. पुनका अनुसार संक्रमण भिडभाडबाटै सर्ने हुँदा अहिले कहाँ बढी भिडभाड भएको यकिन गरी त्यसलाई कडाइ गर्नुपर्छ। नत्र संक्रमण जोखिमको विश्लेषण नगरी गरिएको निर्णयले खासै अर्थ नराख्ने उनी बताउँछन्।
'हामीले संक्रमण कस्तो बेलामा बढी फैलिन्छ भनेर बुझ्नुपर्‍यो नत्र कुनै कुराको मतलब हुँदैन,' पुनले उदाहरण दिँदै भने, 'दिउँसो चाहिँ जुलुस, सभा, मिटिङका मिटिङ हुने अनि राति त धेरै मान्छे यसै पनि घरमै हुन्छन् नि! संक्रमण फैलाउने भनेको त भिडभाडले हो। त्यसैले यसरी सोचेर एकपछि अर्को नियम बनाउँदै जाने हो।'
इपिडियोमोलोजी तथा रोग नियण्त्रण महाशाखाका पूर्वनिर्देशक एवं भाइरोलोजिष्ट डा. वासुदेव पाण्डेले पनि राति ८ बजेपछि सवारीलाई रोक लगाउँदैमा त्यसले संक्रमणको 'चेन ब्रेक' नगराउने बताए।
'उहाँहरूले कुन उद्धेश्यले यो निर्णय गर्नुभयो भन्ने मलाई थाहा भएन। अहिले संक्रमणको 'चेन ब्रेक' गराउने भनेको खोप नै हो। जुन उहाँहरूले गरिरहनु भइरहेकै छ। उहाँहरूले जुन समयमा सवारीलाई रोक गर्ने भन्नुभएको छ, त्यो नै अलिक मिलेन।'
डा. पाण्डले नेपालमा यसै पनि राति आठ नौ बजेपछि पसल बन्द हुने भन्दै त्यसले स्वतः मानिसहरूको भिडभाड कम हुने बताए।
'नेपालमा विदेश जस्तो हुँदैन। विदेशमा त राति भएपछि भिडभाड हुने हो। तर यहाँ त आठ नौ बजेपछि धेरै पसल यसै पनि बन्द हुन्छन्। त्यसैले यसले चेन ब्रेक गराउन खासै अर्थ राख्छ जस्तो लाग्दैन,' उनले भने।
काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कालीप्रसाद पराजुलीले राति हुने भिडभाडलाई लक्षित गरी सवारीलाई रोक लगाउने निर्णय गरेको बताए।
उनले बिहीबारदेखि अत्यावश्यकबाहेकका सवारीलाई राति ८ बजेपछि रोक लगाइने जनाए।
'बेलुका, होटल, रेष्टुरेन्टमा बाइक, सवारी लिएर खान जाने र राति अबेरसम्म भिडभाड गर्ने भइरहेको छ। त्यसलाई कडाइ गर्न खोजिएको हो,' उनले भने।
उनले पछिल्लो समय अस्पतालमा बेडहरूको चाप बढिरहेको भन्दै संक्रमणको 'चेन ब्रेक' गराउन सो निर्णय गरिएको बताए। तर कुनै समस्या परेर राति हिँड्नुपर्ने मान्छेलाई भने व्यवहारिक रूपमा हेरेर छाडिने पराजुलीले जनाए।
'अब कम्तीमा मान्छेले समयमै घर पुग्नुपर्छ भन्ने मनस्थिति बनाउनुपर्‍यो। तर समस्या परेकालाई हामी व्यवहारिक रूपमा हेरेर छोड्छौं,' उनले भने।
तर कुनै निश्चित क्षेत्रमा भएको समस्यालाई लिएर आम मान्छेलाई दुःख दिन मिल्छ? भन्ने प्रश्नमा पराजुलीले अब होटल, रेष्टुरेन्टमा राति हुने भिडभाड रोक्न निगरानी बढाइने बताए।
मंगलबार उपत्यकाका तीन जनै सिडिओहरूको बैठकले उपत्यकामा भदौ ८ गतेसम्म निषेधाज्ञा लम्ब्याउने निर्णय गरेको छ। जारी निषेधाज्ञामा रेष्टुरेन्ट, होटलहरूलाई 'टेक अवे' सेवामार्फत् मात्र व्यवसाय सञ्चालन गर्न भनिए पनि रेष्टुरेन्ट, होटलहरूमा मानिसहरूको भिडभाड सदाझैं हुन थालेको छ।
सरकारले त्यही कारण औंल्याउँदै आगामी बिहीबार राति ८ बजेपछि अत्यावश्यक सवारीबाहेक अन्यलाई रोक लगाउने भनेको हो। तर यो कुरालाई विज्ञहरूले अव्यवहारिक भन्दै यसले संक्रमण घटाउन मद्दत नगर्ने जनाएका छन्।
प्रकाशित मिति: मंगलबार, साउन २६, २०७८, १७:४३:००